Rima Rakadzika Dungeon: mutambo mukuru wakatumirwa Linux | Linux Vakapindwa muropa
Sekutaura kwemusoro wevhidhiyo, Rima Rakadzika Dungeon mutambo wakanaka iyo inowanikwa kune mamwe mapuratifomu senge PlayStation 4, Vita, Mac, uye Windows. Chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti Red Hook Studios yanga ichishanda kutakura zita iri rakakosha kuchikuva chepenguin zvakare uye vakasimbisa kuti yave kuda kugadzirira uye kuvhurwa kwayo kuchave padhuze, saka tinotarisira nhau munguva pfupi iri kutevera.
Kubva Red Hook Studios aburitsa nhau kubva pane chitaurwa pama network anoti «Rima Rakadzika Dungeon reLinux rakanyatsogadzirira uye isu tichaisunungura gare gare mwedzi uno. Tinotenda nekushivirira kwevashandisi vedu vese veLinux uye tinotarisira kukuona uchinakidzwa nemutambo.«. Nekudaro inova imwe yenyaya dzinotarisirwa kwazvo mumunda wevaraidzo yedigital yeLinux yemwaka uno wekutanga we2016.
Kune avo vasingazive Rima Rakasviba Dungeon mutambo wevhidhiyo, unogona kuona rumwe ruzivo muvhidhiyo yatakasiya muchinyorwa chino, asi zvakare taura kuti ndiwo mutambo wevhidhiyo RPG, kurwa-kwakavakirwa kurwa uye kumisikidzwa munyika yemakomba, spooky uye inonakidza. Iwo manzwi uye zvinyorwa zvichadudzirwa uye kutumidzwa muchiSpanish, mukuwedzera pakuchengeta zvakanyanya izvo zvakamuwanisa mamaki e8.5 kana 9.0 kunze kwe10 mune mamwe maseru emitambo yemavhidhiyo.
Yakave yakagamuchirwa kwazvo uye izvozvi zvakare inogona kunakidzwa kubva kune yako Linux distro. Semazuva ese, Valve's Steam chitoro chine zita iri rekutenga. Ndinoomerera, kwenguva yemamwe mapuratifomu, asi tora kufamba mumazuva mashoma uye pamwe uchaiwana yeLinux. Chii chimwe inotsigira SteamPlay, kuti utenge kamwe chete uye unakirwe pamapuratifomu ako ese. Mutengo wazvino ndeye € 22.99 hwaro, kunyangwe paine mapakeji, nezvimwe, saka isu tinofungidzira kuti yeLinux ichave yakafanana kana pamwe ivo vachapa chipo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Rima Dungeon: rakakura mutambo wakatumirwa Linux
Ramon Retamar akadaro
Uyu mutambo une COMIC-senge giraidhi yekushongedza, yakafanana chaizvo neBorderlands.
Pindura Ramon Retamar